Montenegro inikeza izivakashi ukuzilibazisa enhle indawo yemvelo, eziningi ezikhangayo futhi inkonzo enkulu. Lelo zwe kuyakhethwa abahambi abafuna amanga kuphela ogwini, kodwa futhi ukuba bajwayelane isiko lendawo, vakashela ezikhangayo, zazo zikhona lenqwaba. Umangele ngesibalo lapho ukuya eholidini eMontenegro, izivakashi ukuqonda ukuthi lapha kuyoba mnandi futhi ukhululekile ngasiphi resort.
Kuleli zwe izakhamuzi Russian isikhathi hhayi okungaphezu kokukodwa ngenyanga, ungafaka ngaphandle visa. Ngaphezu kwalokho, abanomoya sezulu kanye itshana ukhululekile amabhishi neqhaza ukuphumula ukhululekile. Indawo ethandwa kakhulu phakathi izivakashi - Lase-Ostrog sezindela futhi isiqhingi St kukaStefanu .. Ukukhuluma ngokuthi lapho ukuya eholidini eMontenegro, kubalulekile ukuba uqaphele indawo ye Budva. Lapha ungakwazi ukuhlangabezana eziningi abantu abasha abavela emazweni ehlukene zezwe. Umuzi ngokuvamile iphatha mass izenzakalo ukuzijabulisa, ngakho-ke okuthanda labo abakhetha iholidi esebenzayo, kanye izihambi ngokuvakashela lizwe okokuqala.
On umbuzo ukuphumula malini eMontenegro, ngeke abaphendule ngokungananazi. It kuncike izintandokazi izivakashi 'ngoba ukuchitha isikhathi ezingeni ehhotela ekhethiwe. Phakathi kwamahhotela ngokwezigaba ahlinzekwa njengoba ongakhetha ibhajethi, amafulethi ukhululekile. Amandla ohlelweni lokuthengwa kwempahla "zonke okufakayo" akuyona ovamile kakhulu, ngakho udinga ukuba alungiselele lokho kuyodingeka ukuya amathilomu nezindawo zokudlela, ngenhlanhla, inqwaba.
Ukuze iholidi lomkhaya ngokuvamile Kunconywa Petrovac. Itholakala itheku olunothile futhi linikeza izivakashi esimweni ethule sizungezwe nature enhle. KaMasipala lolwandle ngokuvamile Kwakugcwele amaholide. Abavakashi abakhetha ukuba sezindaweni ezisithekile okwengeziwe, ungavakashela Lucice, eliseduze. Kukhona quay enakho.
Labo ecabanga lapho ukuya eholidini eMontenegro, kufanele sinake Herceg Novi. Inani elikhulu of sifanamsindvo endaweni izitshalo relict. Ngesikhathi nokulahla izivakashi ezihlukahlukene amabhishi: itshana, hhayi kuphela, kodwa futhi eyenziwe umuntu isihlabathi emihle, wadala umuntu. Montenegro inesimo sezulu sasivumela omnene. A ukuvuselela ulwandle ohelezayo kusiza ukuqinisekisa ukuthi ukushisa neze wazizwa ngisho isizini okusezingeni eliphezulu.
A cruise ku yacht - elikhanyayo uhambo ethokozisayo kuhlanganiswe iholidi beach. Ngo Montenegro, zonke izimo zinikezwa le njongo. Yacht linikeza izinhlobo ezahlukene kanye nentengo izigaba. Ngaphezu kwalokho, ithimba ungakhetha okhuluma isiRashiya noma lesiNgisi.
Ukwetha izindawo lapho kangcono uphumule Montenegro ukuze kokubili ngcono ezempilo, udinga ukukhumbula mayelana amabhishi e Ulcinj. Sulphur imithombo kuhlanganiswe le-basalt isihlabathi ifa esiyingqayizivele ukuphulukiswa izakhiwo.
Ngokwesibonelo, e-Montenegro, ayatholakala ezihlukahlukene yokuzijabulisa, ukukhetha kuncike kuphela izidingo zakho, imicabango, kanye namakhono zezimali zezivakashi.
Egumbini Delphic futhi Geology: isayensi, eqinisekisa inganekwane
Kuphi eMoscow nengane
Transformer Electronic: incazelo jikelele kanye isicelo
Amasiko inani lepahla
Umuthi 'Pangrol ": yokusetshenziswa, incazelo, ukwakheka kanye nokubuyekeza
Dermatitis. izimpawu Ukwelashwa profilaktitka.